Mon GTI / GTC / GTU: ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော နေ့ ရက်များ(၁)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:28
Nandar 18 November 2009 at 19:15
Carry on, please. I am sure that will be very interesting one.
Zar Zar 19 November 2009 at 22:39
ဘ၀ကြင်ဖော်နဲ့ တွေ့ခဲ့တာလေးပါ ထည့်ရေးပါအုံး :)
Min Thu 20 November 2009 at 06:16
Romantic ဇတ်လမ်းကတော့ ဆေားရီးပဲ။
ဆင်ဆာနဲ့ ငြိနေလို့ ။
TSW 20 November 2009 at 21:42
ရေးတဲ့သူရှိလို့ ဖက်စရာတစ်ခု ရှိလာတာ
Min Thu 21 November 2009 at 21:19
ရေးတဲ့စာတိုင်း ဖတ်စရာလို့ သဘောထားပေးရင်ပိုကောင်းမလားပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို comments ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Kyaw Min Hein 1 January 2010 at 02:14
ဒီစာကို ဖတ်ပြီး ကျောင်းတောင်ပြန်တတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးနော် ကိုမင်းသူ။